Daawo: Senator Muuse Suudi Yalaxoow oo afka furtay weerar culusna ku qaaday farmaajo | Kismaayo24 News Agency
Daawo: Senator Muuse Suudi Yalaxoow oo afka furtay weerar culusna ku qaaday farmaajo
Sunday April 30, 2017 - 11:32 under Somali News by Tifaftiraha K24
Senator Muuse Suudi Yalaxoow oo ka mid ah xildhibaanada Aqalka sare ee Baarlamaanka Soomaaliya ayaa Dowlada Federaalka ku eedeeyay inay curyaamin ku heyso maamulka Hirshabeelle .
Senator Muuse Suudi ayaa waxaa uu sheegay in Dowlada ay dagaal Diblomaasiyadeed kula jirto Maamulka Hirshabelle oo ah Maamul Dhawaan la dhisay islamarkaana ay kala dagaalameyso dhimacyada Horumarka.
Waxaa uu intaa ku daray Senatorka in Hirshabelle loo diiday in ay furtaan Dekedda Ceel Macaan, Garoonka diyaaradaha Ceseleey sidoo kalana is hor istaag cad lagu sameeyay diyaaradihii qaadka mudadaii labada maalin geynayay garoonka Jowhar.
Wuxuu soo hadal qaaday nidaamka awood qeybsiga dalka oo uu tilmaamay in Hrshabelle ay awalba uu qaladka jiray waxana uu tusaale usoo qaatay wasiirada Hirshabeelle laga siiyay xukuumadda.
Kuwaas oo kala ah midka qaraxyda lagu qabsado oo uu ula jeedo wasiirka amniga iyo midka qaraxyada sheega oo uu isagana ula jeedo wasiirka warfaafina in la siiyay waxaana uu shaacyay in maamulada kale la siiyay min seddex wasiir .
Mudooyinkii u dambeyay waxaa soo ifbaxayay Eedeeynat Masuuliyiinta Maamulka Hirshabelle ay u jeedinayeen Dowlada Federaalka Soomaaliya iyagoo sheegay in dowlada dhexe ay fara gelin iyo dulmi cad ay ku heyso Maamulkaas.